ओलीको बास्तविकता, डाक्टरको २ विकल्प : न. १ लगातार डायलासिस, २. मिर्गौला प्रत्यारोपण – Sanghiya Online
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको धापासीस्थित ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा ‘डायलाइसिस’ गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई बुधबार बिहान नियमित परीक्षणका लागि लगिएको बताइए पनि आईसीयूमा राखेर खोप्य रुपमा डाइलाइसिस गरिएको नेकपा का अर्का अध्यक्ष प्रचन्डले पुष्टि गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निजी चिकित्सक प्राडा दिव्यसिंह शाह र अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर चक्रराज पाण्डेले बुधबार साँझ जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भने प्रधानमन्त्री नियमित उपचार प्रक्रियाका लागि भर्ना भएको उल्लेख छ ।
अस्पताल प्रशासनले प्रधानमन्त्रीको विषयमा औपचारिक जानकारी दिन चाहेको छैन । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुका अनुसार अहिले फेरि मिर्गौलामा समस्या देखिएको छ । अहिले फेरि समस्या आयो । चिकित्सकहरुका अनुसार मिर्गौलाले काम नगरेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीको फोक्सोमा समेत पानी जम्मा भइसकेको रहेछ । त्यही कारण बुधबार आकस्मिक रुपमा डायलासिस गर्ने निर्णय चिकित्सकहरुले लिएका थिए ।
तर, बुधबार प्रधानमन्त्रीको रक्तचाप निकै कम भएका कारण दुई घन्टा मात्र डायलासिस भयो । बिहीबार झण्डै चार घन्टा डायलासिस भयो । दुई चरणको डायलासिसका प्रधानमन्त्री निकै थकित देखिए पनि केही घण्टा आराम गरेर प्रधानमन्त्री बालुवाटार फर्कने चिकित्सकहरुले नेकपा नेताहरुलाई जानकारी दिएका छन् । एक चिकित्सकका अनुसार विहीबार पनि अस्पतालमै आराम गर्दा राम्रो हुने भएता पनि प्रधानमन्त्री डिस्चार्ज भएर आफूलाई सामान्य रहेको देखाउन चाहन्छन् । जब मिर्गौलाले राम्रोसँग काम गर्दैन, त्यस्तो बेला फोक्सो लगायत शरीरका अन्य भागमा पानी जम्मा हुन्छ । र, त्यही पानी निकाल्नका लागि पनि डायलासिस गर्ने गरिन्छ । यससँगै औषधि दिएर मिर्गौलालाई पूर्ण रुपमा सक्रिय बनाउने प्रयास पनि हुनेछ । चिकित्सक हरुले भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई बुधबार र विहीबार दुईपटक डायलासिस गरेर औषधि दिइएको छ, ताकि उनको मिर्गौलाले फेरि पहिले जस्तै काम गरोस् । चिकित्सकहरुले डिस्र्चाज गरेर घर पठाउनुको अर्थ पनि अबको केही दिन उनको अस्वथा हेर्ने उद्देश्य रहेको बताइएको छ । चिकित्सकहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री सामु २ विकल्प छ – एउटा लगातार डायलासिस । दोस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपण ।
महन्थको पहलमा ओली सरकारले बजेटमै छुट्ट्याए इन्जिनियरिङ र मेडिकल कलेज (भिडियो)
आइतवार सार्वजनीक बिदा दिने सरकारको तयारी, परिषदले बुझायो ज्ञापनपत्र, नेताहरुले पहल गर्दै